सिके राउतसँगको सहमतिले नेकपामा विवाद, भिम रावलले मागे गृहमन्त्रीको राजिनामा « Drishti News – Nepalese News Portal
सिके राउतसँगको सहमतिले नेकपामा विवाद, भिम रावलले मागे गृहमन्त्रीको राजिनामा
२५ फाल्गुन २०७५, शनिबार 5:44 pm
सिके रातउसँगको सहमतिलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद देखिएको छ । द्विअर्थी सहमति गरेको भन्दै नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री भीम बहादुर रावलले सहमति कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले उक्त सहमतिले कतै राष्ट्र टुक्राउने कुरालाई वैद्यता त प्रदान गर्दैन् ? भन्दै प्रश्न समेत ष्रेका छन् ।
पार्टी्भित्र छलफल नभएकोमा आक्रोश
यत्रो सहमति गर्दा पनि पार्टी्भित्र छलफल नभएकोमा आक्रोश पोख्दै रावलले भने, ‘पार्टीमा यस विषयमा छलफल गर्नुपर्दैन? मैले त सहमति हुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि नेताहरुमार्फत आफ्नो मत प्रेषित गरेको थिएँ। हाम्रै पार्टीका साथीहरुले पनि भाषाहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। तर, सच्याइएन। पार्टी भनेको सामूहिकतामा चल्नुपर्छ। एकरदुई जनालाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने भए किन पार्टी चाहियो?’
रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई दार्श्निक भनेर सम्बोधन गरेकोमा पनि आश्चर्य प्रकट गरे। उनले भने, ‘मलाई त गज्जब लाग्यो, राउतलाई दार्श्निक भनियो, उसो भए अब के हामी उहाँकै दर्शनमा चल्नुपर्ने हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।’